सावधान ! चिया पिएपछि भुलेर पनि सेवन नगर्नुहोस् यी चिज, नत्र लाग्नसक्छ अनेकथरी बिमारी – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/सावधान ! चिया पिएपछि भुलेर पनि सेवन नगर्नुहोस् यी चिज, नत्र लाग्नसक्छ अनेकथरी बिमारी
-तातो चीया पिउने बित्तिकै पानी पिउन हुँदैन, त्यस समयमा पानी पिउँदा घातक सिद्ध हुनसक्छ । चीया पिउने बित्तिकै तुरुन्त पानी पिउनाले हाम्रो नाकबाट रगत आउन सक्छ ।-यदि चिया पिएपछि बेसार भएको दुध पिएमा जन्डिस रोग लाग्न सक्छ । यसकारण चिया पिएपछि बेसार हालेको दुध पिउनबाट बच्नु पर्छ । ** यो समाचार पुरा हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **